Bit By Bit - Ethics - 6.5 Laba Qaababka anshaxa
Doodaha ku saabsan anshaxa cilmi intooda badan loo yareeyo in khilaafka u dhexeeya consequentialism iyo deontology.
Afartan mabaadiida asluubta ee ixtiraamka dadka, faa'iidada, cadaaladda, iyo ixtiraamka sharciga iyo danta guud waa kuwo si weyn uga soo jeeda laba qaab oo kale oo sifo ah oo la taaban karo: natiijooyinka iyo deontology . Fahminta qaab-dhismeedyadani waa mid waxtar leh, maxaa yeelay waxay awood u siinaysaa inaad aqoonsatid oo ka dibna sabab u noqotid mid ka mid ah xiisadaha ugu muhiimsan ee anshaxa cilmi-baarista: isticmaalida habab aan habooneyn oo lagu gaaro dhammaadka anshaxa.
Dhibaatada, oo xididdada ka shaqeeya Jeremy Bentham iyo John Stuart Mill, ayaa diiradda saaraya qaadashada tallaabooyin keenaya dawlado wanaagsan oo adduunka ah (Sinnott-Armstrong 2014) . Mabda 'faa'iido leh, oo diiradda saaraya isu dheelitirka khatarta iyo faa'iidooyinka, ayaa si qotodheer u ah fekerka natiijada. Dhinaca kale, deontology, oo xididdada ka shaqeeya Immanuel Kant, wuxuu diiradda saarayaa waajibaadka anshaxa, oo ka madaxbannaan cawaaqibkooda (Alexander and Moore 2015) . Mabda'a Ixtiraamka Dadka, oo diiradda saaraya madaxbannaanida ka qaybgalayaasha, ayaa si qoto dheer uga fekeraya fikirka diimeed. Nidaam degdeg ah oo qallafsan oo loo kala saaro labada qaab ayaa ah in dadka cilmi-nafsiga ah diiradda saaraan habka iyo natiijooyinka ay diirada saaraan dhamaadka .
Si aad u aragto sida labadan qaab-dhismeed u shaqeeyaan, tixgeli oggolaanshaha la wargeliyay. Labada qaab ayaa loo isticmaali karaa si ay u taageeraan ogolaanshaha la wargeliyay, laakiin sababo kala duwan. Doodda natiijada ah ee ogolaashaha wargelinta waa in ay ka caawisaa ka hortagga waxyeellada ka qaybgalayaasha iyagoo mamnuucaya cilmi-baaris aan si habboon u dheelitirin khatarta iyo faa'iidada la filayo. Si kale haddii loo dhigo, fikradda natiijadu waxay taageeri doontaa ogolaansho wargalin sababtoo ah waxay ka caawineysaa ka-hortagga natiijooyinka xun ee ka-qaybgalayaasha. Si kastaba ha ahaatee, doodda deontological ee ogolaansho wargelin ah ayaa diiradda saaraysa cilmi-baadhaha waajibaadkiisa ah inuu ixtiraamo madax-bannaanida ka-qaybgalayaasheeda. Marka la eego hababkaas, natiijo macquul ah ayaa laga yaabaa inay diyaar u noqoto in la dhaafo shuruudda ogolaashaha la ogeysiiyey meel aan jirin wax khatar ah, halka laga yaabo in aan loo aqoonin daahfurnaanta.
Labada natiijo iyo deontology labaduba waxay bixiyaan aragti anshaxeed oo muhiim ah, laakiin mid waliba waa loo qaadan karaa xudduudaha qallafsan. Wixii ku saabsan natiijada, mid ka mid ah xaaladahan xad-dhaaf ah waxaa loo yaqaan " Transplant" . Bal qiyaas dhakhtarka qaba shan bukaan ah oo dhimanaya xubin la'aanta iyo hal bukaan caafimaad qaba kuwaasi oo hay'adooda ay badbaadin karaan dhammaan shanta. Xaaladaha qaarkood, dhakhtarka soo-saarka ayaa loo oggolaan doonaa- iyo xitaa looga baahan yahay-inuu ku dilo bukaanka caafimaad qaba inuu helo xubnahiisa. Tani waxay diiradda saareysaa dhammaadka, iyada oo aan loo eegin micnaheeda, waa cilad.
Sidoo kale, deontology ayaa sidoo kale loo qaadi karaa xagjirnimo, sida kiiska oo loo yaqaan "bom " time . Bal qiyaas sarkaal bilays ah oo qabsaday argagixiso oo garanaya halka uu ku yaal bam la duubayo oo dila malaayiin qof. Sarkaal bileys ah oo aan saldhig u aheyn ma been sheegayo si uu ugu hanjabto argagixisanimo si uu u muujiyo goobta bamka. Tani waxay diiradda saareysaa ficil ahaan, iyada oo aan la eegin dhammaadka, sidoo kale waa cilad.
Ficil ahaan, cilmi-baarayaasha bulsheed intooda badani waxay si qoto dheer u qeexayaan isku-duubnaanta labadan habdhaqaneed ee anshaxa. In la ogaado isku dhafanaanta iskuulada anshaxa ayaa ka caawiya sababta ay u badan yihiin doodaha anshaxa - kuwaas oo u muuqda mid u dhaxeeya kuwa leh natiijo dheeraad ah iyo kuwa aan deontiyolojiga ahayn - ha sameynin horumar badan. Dhibbanayaasha waxay guud ahaan bixiyaan doodo ku saabsan dhammaadka-doodaha aan ku qanacsanayn deontologists, kuwaas oo ka walaacsan habka. Sidoo kale, maologists waxay u muuqdaan inay soo bandhigaan doodo ku saabsan macnaha, taas oo aan ku qanacsaneyn natiijooyinka, kuwaas oo diiradda saaraya dhamaadka. Argagixisada u dhaxaysa natiijooyinka iyo dhakhaatiirta deontologu waxay u eg yihiin laba maraakiib oo habeenkii gudbaya.
Hal xal oo ka mid ah doodahaasi waxay noqon doonaan cilmi-baarayaasha bulshada si ay u horumariyaan si joogta ah, anshax adag, iyo si sahlan oo loo dabaqo natiijooyinka natiijada iyo deontology. Nasiib darro, taasi uma badna inay dhacdo; falsafrrrrradu waxay la halgamayeen dhibaatooyinkan wakhti dheer. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaashu waxay isticmaali karaan labadan habdhaqaneed-iyo afar qodob oo ay u maleynayaan-inay ka hadlaan caqabadaha anshaxa, cadeynayaan ganacsiyada, iyo soo jeedinta hagaajinta naqshadaynta cilmi-baarista.